Ingiriiska oo Gaadiid ku wareejiyay Somalia – Radio Daljir
Ingiriiska oo Gaadiid ku wareejiyay Somalia
Diseembar 20, 2015 3:58 b 0
Somalia, December 20, 2015-(Daljir)_ Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Gen;Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini,ayaa gaadiid loogu deeqay Ciidanka Xoogga dalka kala wareegay Safiirka Britain ee Soomaaliya haweeneyda lagu magacaabo Harriet Mathews.
Gen;Diini ayaa uga mahadceliyay dowladda Ingiriiska caawimada ay had iyo goor la garab taagan tahay bulshada iyo ciidamada Soomaaliyeed,isagoo sheegay in taageera kastoo ah mid ciidan loo adeegsan doono si waafaqsan sharciga iyo nidaamka dawliga ah.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Gen: Maxamed Aaden Axmed oo goobta ka hadlay ayaa xusay in gaadiidkan ay dowladda Britain ugu deeqday ciidanka uu yimid xilli ay jirtay baahi. Isagoo mahadcelin u jeediyey Safiirka iyo dawladda Ingiriiska.
Safiirka Boqortooyada Ingiriiska ee Soomaaliya Danjire;Harriet Mathews ayaa xustay in taageeridda dowladda Ingiriiska ay u fidineyso Soomaaliya inay ka tahay daacad, Isla markaana ay xoojinayaan gacanta siinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Gudoomiye la weeraray oo ka Hadlay Qarax lala Eegtay